Faharavana fikambanan-jiolahy :: Zandary matin’ny polisy teny amin’ny Fasan’ny karàna • AoRaha
Namoy ny ainy rehefa tonga teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) Ampefiloha ny lehilahy iray voatifitry ny polisy teny amin’ny Fasan’ny karàna, omaly vao maraina be. Nifanenjehan’ny pôlisy tamin’ny môtô ny jiolahy roa avy nanafika fiara iray teny Anosimpatrana. Teny amin’ny Fasan’ny karàna no tra-tehaka ny iray taorian’ny fianjerany tamin’ny môtô nentiny.
Nitifitra ny polisy avy hatrany io jiolahy io, taorian’ izay, saingy nandavo azy ny valy bontana avy amin’ireo mpitandro filaminana. “Rehefa nosavaina ny tao anatin’ ny môtô dia nahitana karatra maha zandary sy taratasy maromaro momba ny asa ao amin’ny Zandarimaria. Randrianjafimanga Jean Luc no anarany, araka ny voasoratra ao amin’ilay karatra », hoy ireo polisy. Nanontaniana momba io lehilahy io ny foibe fibaikoana ny Zandarimaria ka nanamarina tokoa fa zandary miasa ao amin’ny foibem-pitondrana misahana ny lamina sy ny asa ao amin’ny foibe fibaikoana ny Zandarimaria eny amin’ny Toby Ratsimandrava itsy namoy ny ainy itsy.
Nisy fiara marika “Wolkswagen Crafter” iray an’olona monina eny Anosimpatrana Andrefana nosakanan’ny lehilahy roa manao fanamiana polisy teo Anosimpatrana, omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora.
Nisava ny taratasin’ny fiara izy ireo. Taorian’izay dia nosokafany ny varavarana amin’ny ilany havanana fidiran’ny mpandeha. Nalain’izy ireo ny sakaosy iray misy vola 36 tapitrisa ariary tao anatin’ilay fiara. Sady nanambana basy izy roa lahy no nitsoaka.
Nampandre ireo polisy mitandro ny fifamoivoizana eo Anosizato ny niharamboina taorian’izay. Ireto farany no nanenjika ireo jiolahy ka io tra-tehaka teny amin’ny Fasan’ny karàna io ny iray. “Midera ny ezaky ny namana ao amin’ny Polisim-pirenena izahay tamin’izao zava-bita izao. Mampanantena ny Zandarimaria fa hanampy azy ireo amin’ny fikarohana ny jiolahy naman’ilay namoy ny ainy. Raha tsy namoy ny ainy io zandary io dia natolotra ny Fitsarana ary azo antoka fa ho voaroaka tsy ho isan’ny fianakaviamben’ny Zandarimaria intsony”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria vao naheno ity zava-nisy omaly ity.
Tranga tany Ankazobe :: Vehivavy hita faty nihantona tany anaty ala
Fandrobana sy vono olona :: Telo lahy matin’ireo mpangalatr’omby